फुलन्देकी आमा को हुन ? «
फुलन्देकी आमा को हुन ?
प्रकाशित मिति : 19 March, 2020 11:48 am
काठमाडौं : एक दिन आफू चर्चित हास्य कलाकार हुन्छु भनेर उमेश राईले कहिल्यै पनि सोचेका थिएन । दुई वर्ष साउदी अरेबियामा ‘स्टोर किपर’ को रूपमा काम गरेर वि.सं २०७२ सालमा उमेश नेपाल फर्किए र चर्चित कलाकार बन्न पुगे। भोजपुरमा जन्मिएका २६ वर्षीय उमेशले पहिलो इनिङ्गमै हास्य क्षेत्रमा सफलता हात परे।
फुलंदेकी आमाको भूमिकाबाट चर्चाको शिखर चुम्न सफल कलाकार हुन् उमेश राई। देश तथा बिदेशमा रहने नेपालीहरुले उनको अभिनय र नृत्यकौशलको खुलेर तारिफ गरेका छन। छोटो समयमा नै सबैको प्यारो बन्न सफल राई पछिल्लो समय विभिन्न मिडियाहरु मा अन्तर्वार्ता दिदैमा व्यस्त छन।
यो क्षेत्रमा नयाँ अनुहार भएपनि उनले ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ नामक कार्यक्रममा निर्वाह गर्ने ‘फुलन्देको आमा’ भूमिकामा कारणा उनी रूचाइएका छन्। महिला पात्रको भूमिका गरेपछि लैङ्गिक मुद्दालाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन भएको उनी बताउँछन्। पुरुष भन्दा महिला कुनै पक्षमा कमजोर नहुने उनको बुझाइ छ।
समाजसेवी जनकराज राईले घरभाडा नलिने
69 Views२३ चैत । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि पूरै देश लकडाउन भइरहेको बेला होलेसुङ
क्वारेन्टाइनमा सुरुमा बस्दा त दिमाखले कामै गरेन : गायक प्रियजन राई
43 Viewsकाठमाडौ । सरकारले देशभर कोरोना भाइरस नफैलियोस् भने लकडाउन लगाएको अवस्था छ । कलाकारहरु
सजिलै त कहाँ आउँछ ? ‘गजल’- सुर्य नाछिरिङ राई
148 Views दिनहुँ पत्रिकामा अशुभ समचार देखेर दिक्कलाग्छ सत्तामा पुगेकाे देश लुट्ने गद्दार देखेर दिक्कलाग्छ
कसरी कोरोना रोक्न सफल क्युवा र विश्वले के सिक्ने ?
95 Views अगष्ट १९, १९६० मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी छापामार तथा डा.अर्नेस्टो चे गुभाराले जोड दिएर
22 Viewsमधुकर अधिकारी वासिङ्टन डिसी अमेरिकामा विभिन्न तरिकाले बसोबास गर्दै आएका नेपालीमूलका अमेरिकी तथा नेपालीभाषी
युएईद्वारा कोरोनाभाइरसको असरसँग जुध्न नयाँ आर्थिक प्याकेजको घोषणा
19 Viewsअबु धाबी, २३ चैत (रासस–एएफपी) युनाईटेड अरब इमिरेट्सको केन्द्रीय बैंकले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा
श्रीलंकाका जेलबाट झण्डै तीन हजार रिहा
24 Viewsकोलम्बो, २३ चैत – कारागारमा रहेका झण्डै तीन हजार जनालाई श्रीलंका सरकारले रिहा गरिदिएको